Badidekile abaqeqeshi ngoluleme
UMDLALI weLamontville Golden Arrows uZolani Nkombelo angase ibhincisele nxanye abaningi njengoba eseluleme ekulimaleni
Mthokozisi Mncuseni | January 31, 2019
KUPHITHENE ikhanda ethimbeni labaqeqeshi beLamontville Golden Arrows kulandela ukululama ngokugcwele kukaZolani Nkombelo obesehlale izinyanga ezicela kweziyisithupha engalithinti ibhola ngenxa yokulimala. Inkinga iqale ngokuthi alulame lo mdlali.
Ekululameni kukaNkombelo, ithimba labaqeqeshi be-Arrows uSteve Komphela noMandla Ncikazi bamnike ithuba kowe-Last 32 abawudlale ngoMgqibelo neTjakastad Junior Shepard eMbombela Stadium. Ayigcinanga ngokunqoba i-Arrows lapha kodwa ithole izindaba ezimnandi eseqokwa njengomdlali ovelele uNkombelo.
Yikhona lokhu osekudida uKomphela noNcikazi ngoba uNkombela uqokwa nje, uDevine Lunga odlala endaweni efanayo naye ugila izimanga kangangokuthi kowokugcina awudlalile naye uqokwe njengomdlali ovelele.
“Uma uzokhumbula sike saba nenkinga yabadlali bangakwesokunxele belimele bonke ngakho ukubuya kukaNkombelo kusiqinisa ngendlela engeke ichazeke. Angazi noma ngithi yinhlanhla yini kodwa ubuye ngesikhathi esikahle impela edingeka. Okumnandi kakhulu manje kithina njengabaqeqeshi wukuthi sesizodideka uma sekufanele siqoke abadlali abazodlala,” kusho uNcikazi.
Lo mqeqeshi ujabule kakhulu ngendlela uKomphela afike wabakhulula ngayo abadlali futhi ukholwa wukuthi udumo lwe-Arrows lusendleleni ebuyayo.
“Okufike nomqeqeshi kuhle ngoba ufike wakhulula abadlali ukuthi badlale ngendlela vele abakwazi ukudlala ngayo kangangokuthi nesithende uma sivuma sivumelekile. Lokhu kumnandi ngaphakathi ngoba i-Arrows yiqembu elaziwa ngokuthi lidlala ngisho kunzima kanjani,” kuqhuba uNcikazi.
Ukhale kakhulu ngokubhekana neHighlands Park ngoba indlela edlala ngayo inzima. Echazela Isolezwe izolo emini uNcikazi uchaze ukudlala neHighlands njengokuthi kubuhlungu.
“Kuwona wonke amaqembu akhona kwiPSL, iHighlands Park ngiyayinqena. Ngingamane ngidlale nawo wonke amanye kodwa hhayi iHighlands. Akukho ukuphumula uma kudlalwa nabo ngoba indoda ishada nawe umdlalo wonke ingasaphathwa eyamabhola ahamba emoyeni. Ubona izinkanyezi ngempela. Buka ngoba thina sinabadlali abanemizimba emincane ngakho kusemqoka ukuthi sihlele ukuthi kungathintwana,” usho kanje sakuncokola uNcikazi.
Ujobelele ngokuthi banalo iqhinga lokuwaqoqa egcwele amaphuzu ngoba nabo banawo amaqhinga okudlala namaqembu akholelwa kakhulu ezikhwepheni. Umdlalo we-Arrows neHighlands Park ungoMgqibelo ngo-3 ntambama, eSugar Ray Xulu Stadium, ngo-3.30 ntambama.